बिक्री आउटरीच: छ वटा रणनीतिहरू जुन हार्ट दिल (र अन्य सुझावहरू!) | Martech Zone
व्यापार पत्र लेख्नु अवधारणा हो जुन विगतमा फिर्ता तन्किन्छ। त्यस समयमा, शारीरिक बिक्री पत्र ढोका-देखि-ढोका विपणक र तिनीहरूको पिचहरू प्रतिस्थापन गर्न को लागी एक प्रवृत्ति थियो। आधुनिक समयलाई आधुनिक दृष्टिकोणहरू आवश्यक पर्दछ (केवल प्रदर्शन विज्ञापनमा परिवर्तनहरू हेर्नुहोस्) र व्यवसाय बिक्री पत्रहरू लेख्नु कुनै अपवाद हुँदैन।
केही सामान्य सिद्धान्तहरू एक राम्रो बिक्री पत्र को फारम र तत्व को लागी अझै लागू। त्योले भन्यो, तपाईको ब्यापार पत्रको संरचना र लम्बाई तपाईको दर्शकको प्रकार र तपाईले बेच्न चाहानु भएको उत्पादनमा निर्भर गर्दछ। सामान्य लम्बाई --4 अनुच्छेद हो, तर यो अधिक हुन सक्दछ यदि तपाईंको उत्पादनहरूलाई सटीक वर्णनको आवश्यक पर्दछ, वा कम, अधिक सिधा प्रस्तावहरूको लागि।
यद्यपि हामी उपयोगी ह्याक्समा ध्यान केन्द्रित गर्दछौं जसले तपाईंलाई केवल सम्झौताहरू बन्द गर्न मद्दत गर्दछ तर तपाईंको दर्शकहरूको मन जित्न पनि मद्दत पुर्‍याउँछ।
रणनीति १: तपाईंको व्यवसाय बिक्री पत्र निजीकृत गर्न स्वचालन प्रयोग गर्नुहोस्
यदि तपाईं आफ्नो व्यापार बिक्री पत्रहरू जीत गर्न चाहनुहुन्छ भने, तपाईं धेरै तरिकामा बाहिर खडा हुन आवश्यक पर्दछ। पहिले, तपाइँ रचनात्मक हुन र व्यक्तिगत केहि गर्न आवश्यक छ। हस्तलिखित नोटहरू पठाउनु तपाईंको पत्राचार पठाउनको लागि उत्तम तरिका हो, तथापि, तिनीहरूलाई व्यक्तिगत रूपमा लेख्नु समय खपत हुने हुन सक्छ।
भाग्यवस, तपाईं एक प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ हस्तलिखित पत्र सेवा यसले सम्पूर्ण प्रक्रियालाई स्वचालित बनाउँदछ र तपाईंको पाठ जस्तो देखिने बनाउँदछ कि यो मानव हातले वास्तविक कलम प्रयोग गरेर लेखिएको थियो। यस्तो व्यावहारिक चिठी पठाउनु, दृश्य अपिल गर्ने, व्यक्तिगत लेखन शैलीको साथ, प्राप्तकर्ताको मन जित्नको लागि उत्तम तरिका हो।
रणनीति २: कडा सामाजिक प्रमाण समावेश गर्नुहोस्
केहि भन्दा राम्रो बेच्न एक उत्पादन कि छ कि "जीवन परिवर्तन" डब गरीएको थियो की राय र ती प्रयोग गर्नेहरूको अनुभव। यसको मतलब यो होइन कि तपाईंको उत्पाद क्रान्तिकारी हुनु आवश्यक छ, तर यसको सन्तुष्ट ग्राहकहरूको आवाजले आकार दिएको कडा सामाजिक प्रमाण हुनुपर्दछ।
त्यसकारण यो तपाईंको बिक्री पत्रहरूमा सामाजिक प्रमाण समावेश गर्न ठूलो छ। भिडियो प्रशंसापत्रलाई लिंकहरू प्रदान गर्नु त्यो गर्ने एक तरिका हो। यो विधि प्रभावी रूपमा बिक्री ड्राइव को लागी प्रमाणित छ।
ग्राहक भिडियो प्रशंसापत्र सीटीए (कल टु एक्शन) बटनको प्रस्तावना हो जुन प्रशंसापत्रको मुनि स्थित हुनुपर्दछ। उद्देश्य सकारात्मक भावनाहरू र प्रेरणाको गति को उपयोग गर्नु हो जुन तपाईंको प्रशंसनीय दर्शकहरूमा उदाउँदछन् र प्राकृतिक रूपमा उनीहरूलाई खरीदको विकल्प दिनुहोस् (एक सीटीए मार्फत)।
रणनीति:: लिंक्डइन अटोमेसन उपकरण प्रयोग गर्नुहोस्
लिन्कडइन भन्दा B2B मार्केटरहरु को लाभ उठाउन र बिक्री पत्र पठाउन को लागी राम्रो ठाउँ छैन। लिंक्डइन एक विशाल व्यवसाय प्लेटफर्म हो जहाँ सबै प्रकारका पेशेवरहरू सिक्न, नेटवर्क, उनीहरूको व्यवसाय मापन गर्न र आफ्नो उत्पादन वा सेवा मार्केट गर्न भेला हुन्छन्। यो धेरै अवसरहरूको साथ एक अद्वितीय बजार हो जुन तपाईंको बिक्री रणनीतिको लागि लाभ उठाउनु पर्छ।
धेरै लिंक्डइन स्वचालन उपकरणहरू तपाइँलाई सृजनात्मक तरीकाले उच्च स्तरीय निजीकरण पूरा गर्न मद्दत गर्न सक्छ। उदाहरण को लागी, यी मध्ये केहि उपकरणले छवि निजीकरण प्रदान गर्दछ ताकि तपाई छविको भित्र प्राप्तकर्ताको नाम वा प्रोफाइल फोटो थप्न सक्नुहुनेछ, यसलाई अधिक व्यक्तिगत बनाउन। लिंक्डइन अटोमेसन उपकरणले तपाईंको लक्षित श्रोताको प्रोफाइलबाट सही जानकारी पनि स्क्र्याप गर्न सक्दछ र मानवले तिनीहरूलाई लेखेको रूपमा ब्यक्तिगत र सहज सन्देशहरू सिर्जना गर्दछ।
रणनीति:: खोल्ने लाइन व्यक्तिगत बनाउनुहोस्
बिक्री चिठी लेख्दा एउटा ठूलो गल्ती अनुपयुक्त अभिवादन हो। कसैलाई जेनेरिक अभिवादनहरू मनपर्दैन "प्रिय वफादार ग्राहक" वा "प्रिय पाठक"। यसको सट्टामा, तपाइँका दर्शकहरू विशेष महसुस गर्न चाहन्छन्, सम्मानित छन्, र अनुपम व्यवहार गर्दछन्।
त्यसकारण उनीहरूको नाम र व्यवसायहरू समावेश गर्दै (B2B व्यवसायहरूको लागि) तपाईंको अभिवादनमा, तपाईंलाई यो निश्चित व्यक्तिलाई सम्बोधन गर्दै हुनुहुन्छ भनेर देखाउने निश्चित तरीका हो। "डियर बेन" वा "प्रिय डाक्टर रिचर्ड्स" बाट जानुहुँदा तपाइँले लामो यात्रा पाउनुहुनेछ र प्राप्तकर्ताले तपाइँको चिठी पढ्न चाहानुहुन्छ भनेर निश्चित गर्दछ।
ठूलो श्रोताहरूको साथ, प्रत्येक व्यक्तिलाई अद्वितीय तरीकाले म्यानुअल रूपमा सम्बोधन गर्न र तिनीहरूलाई अनुरूप प्रत्येक पत्र लेख्न गाह्रो छ। त्यहि हो जहाँ स्वचालन काम आउँछ र नाम, पेशा, लि gender्ग, आदि जस्ता जानकारी मैन्युअल रूपमा स collecting्कलन गरेर धेरै समय बचत गर्दछ।
रणनीति:: तपाईंको बिक्री आउटरीचको लागि भिडियोहरू प्रयोग गर्नुहोस्
भिडियो हाल सबैभन्दा मध्ये एक हो वांछनीय सामग्री ढाँचा त्यो ड्राइव सment्लग्नता अविश्वसनीय छ र दर्शकहरु लाई अन्य कुनै ढाँचा भन्दा अधिक डुबाउन सक्छ। तपाईंले यसलाई तपाईंको फाइदाको लागि उठाउनुपर्दछ र तपाईंको ब्याप्ट पिचलाई थप प्रभावकारी बनाउन यसलाई तपाईंको व्यवसायमा राख्नु पर्छ।
भिडियो पिचले द्रुत रूपमा दर्शकहरूको ध्यान खिच्न सक्छ र संक्षिप्त रूपमा शीर्षकहरू छलफल गर्न सक्छ जुन तपाइँ पाठ ढाँचा प्रयोग गरेर सामान्य रूपमा कभर गर्नुहुन्छ। भिडियोको साथ, तपाईं कार्यमा तपाईंको सेवाको कार्यक्षम दृश्यहरू समावेश गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईंको ग्राहकको सन्तुष्टि प्रदर्शन गर्न, र अन्तमा, तपाईंको श्रोताको साथ गहिरो जडान गर्नुहोस्।
धेरै उपकरणहरूले तपाईंलाई धनी एनिमेसनहरू र आँखा-आकर्षक हुने दृश्यहरू, जुन रूपान्तरणहरू ड्राइभ गर्न सक्ने भरखरै एक निजीकृत भिडियो सन्देश बनाउन मद्दत गर्दछ।
रणनीति:: काउन्टडाउन टाइमरहरू प्रयोग गर्नुहोस्
तपाईं काउन्टडाउन टाईमरहरू तपाईंको बिक्री ईमेलहरूमा समावेश गर्न सक्नुहुनेछ किनकि ती व्यक्तिले पढिरहेको बेलामा जोडतोडको भावना जगाउन सक्छ। यी टाइमरहरू शीर्षमा, हेडलाइनको मुनि स्थित हुनुपर्दछ, हड्तालको रूपमा देखा पर्दछ जसले ध्यान आकर्षित गर्दछ।
तपाईंको लक्ष्य तिनीहरूलाई हडबडका लागि होइन तर तपाईंको उत्पादनको उत्तम सुविधाहरू प्रदर्शन गर्न र कार्यमा समय सीमित छ भनेर जोड दिन। त्योले भन्यो, तपाईंसँग अझै पनि उनीहरूको दुखाइ पोइन्टहरूको लागि प्रभावकारी समाधान र यसको प्रदर्शन गर्न उचित विधि हुनु आवश्यक छ।
यहाँ केहि अतिरिक्त बिक्री आउटरीच सल्लाहहरू छन्
यहाँ केहि सल्लाहहरू छन् तपाईको ब्यापार बिक्री पत्रहरूले मन जित्न:
निश्चित गर्नुहोस् तपाईंको दर्शकलाई चिन्न र तिनीहरूलाई राम्ररी सेगमेंट गर्नुहोस् ताकि तपाईं तिनीहरूको विवरणहरू जान्न सक्नुहुनेछ
सम्मोहक हेडलाइटहरू र उपशीर्षकहरू सिर्जना गर्नुहोस् जुन तपाईंको दर्शकको प्रकारसँग मेल खान्छ
एक भन्दा बढी सीटीएहरू समावेश गर्नुहोस् जहाँ यो प्राकृतिक छ (तपाईंको तल) भिडियो प्रशंसापत्र, पत्रको अन्त्यमा, आदि)
तपाईका पाठकहरूमा भावना जगाउन हुकको प्रयोग गर्नुहोस्
तपाईंको पत्र भरि रहस्य बक्सहरू प्रयोग गर्नुहोस् पाठकहरूलाई अन्यमा पढ्नको लागि यसलाई समाधान गर्नुहोस्
सँधै पहिलो पृष्ठमा तपाइँको प्रस्ताव राख्नुहोस्
जानकारीको साथ अधिक नबनाउनुहोस्, केवल उत्तम तथ्यहरू, सुविधाहरू, र अन्य विशिष्ट गुणहरू समावेश गर्नुहोस् जुन तपाईंको उत्पादन र सेवामा छ
जस्तै प्राविधिक प्रयोग गर्नुहोस् जॉनसन बक्स पत्रमा तपाईको प्रस्तावका फाइदाहरू हाइलाइट गर्न
जोनसन बक्स के हो?
Xt० वर्ष अघि विज्ञापन विज्ञ फ्रान्क एच। जॉनसनले परीक्षण गरे कि यदि उनले आफ्नो बिक्री पत्रहरूमा प्रतिक्रिया दरहरू वृद्धि गर्न सक्दछन् जुन मायालु तरीकाका रूपमा चिनिन्छ। जॉनसन बोx जोनसन बक्सले अभिवादनको माथिको शीर्षकमा प्रस्ताव प्रस्ताव गर्दछ।
राम्रो ब्यापार बिक्री आउटरीच लेखन विचारशील र मांग प्रक्रिया हो। तपाईका शब्दहरू होशियारीका साथ लेख्नुपर्दछ, तपाईको सामग्री राम्रो संगठित छ र पढे पछि छाप "यो उत्पाद मूल्य दिन्छ" चिच्याउनु पर्छ।
थप रूपमा, ह्याकहरू प्रयोग गर्नाले तपाईंको समय बचत गर्दछ र म्यानुअल रूपमा अनावश्यक गतिविधिहरू गर्नबाट बच्न केही सर्टकटहरू प्रदान गर्दछ। ह्याक्सले तपाईको बिक्री पत्रको सामग्रीमा व्यक्तित्व र रचनात्मकताको स्पर्श थप्न सक्छ जुन तपाइँको दर्शक र उनीहरूको विवरणहरूको लागि अनुकूल छ।
कडा बिक्री प्रतिलिपि एक सफल व्यापार पत्रको मूल हो र रचनात्मक रूपमा ह्याक्सहरू प्रयोग गर्नेहरू प्राप्तकर्ताको हृदय जित्ने ढोका हो।
टैग: व्यापार पत्रकाउन्टीडाउनकाउन्टडाउन टाइमरहरूctaप्रत्यक्ष मेलस्पष्ट कुरा जोनसनहस्तलेखन टेक्नोलोजीहस्तलेखनहस्तलिखित पत्र सेवाहस्तलिखितकसरी बिक्री पत्र लेख्नजॉनसन बक्सचिठी सेवाचिठी लेखनलिin्कडिन अटोमेसनखोल्ने लाइनआउटरीच सल्लाहहरूबिक्री प्रतिलिपिबिक्री copywritingबिक्री पत्रबिक्री आउटरीचबिक्री आउटरीच सल्लाहहरूबिक्री आउटरीच को लागी भिडियो